साधन-श्रोतमा भ्रष्टाचार गर्ने चरित्र वर्तमान सत्ता पक्षको मुल विषेषता हो: डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी - सुनाखरी न्युज
Posted on: May 16, 2020 - 1:02 pm
पुर्व अर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेपाली राजनीतिको मात्र नभई आर्थिक क्षेत्रका समेत चर्चित ब्यक्ति हुन् । राजसंस्था सहित को प्रजातन्त्र को पक्षधर उनी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा समेत सक्रिय छन् । डा. लोहनी उनी २०३८,२०४२,२०४८,२०५१, मा नुवाकोट वाट निर्वाचित भएका थिए । पञ्चायतकाल देखि नै राजनीतिमा सक्रिय डा. लोहनीले अन्य मन्त्रलायका साथै अर्थमन्त्री, संसदीय समितिका प्रमुख लगायत धेरै जिम्मेवारीहरू बहन गरेका छन्। सरकारले हालै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको विद्यमान अवस्थामा आगामी बजेट र त्यससश्ँग सम्वद्ध विभिन्न पक्षमा आधारितरही डा. लोहनीसँग सुनाखरी न्युजकालागि शिव दुवाडीले गरेको कुराकानीको संक्षेप:
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?
यसमा नीति थोरै र कार्यक्रम हर धेरै छ। विभिन्न मन्त्रालय हरु ले जे लेखेर पठाए त्यसलाई जोडेर र कुनै सम्पादन नगरेर राखिदिएको छ ।झारो टार्ने काम भएको छ । भ्रस्टा चार रोक्ने कुरो हासो लाग्दो छ। बिरामी को लागि औषधि किन्दा समेत बेइमानी गर्ने हरुले भ्रस्टा चार रोक्छु भन्नु जनता ठग्नु हो । कारोना बाट थलिएको अर्थतन्त्र बारे चिन्तन र यसको नेपाली जनता को जनजीबन मा परेको प्रभाव र समाधान बारे गम्भीरता छैन सायद त्यसैले होला हजारौ सिमाना मा रोकिएका नेपाली बारे कुनै चिन्ता छैन । बिगत दुइ बर्ष को सरकारी काम हेर्दा यो आउने बर्ष सुधार होला भनेर आसा गर्ने ठाउँ छैन। लुट र भ्रस्टाचार रोकिने छैन । नेपाल को सिमाना तय गर्दा प्रमाण र नक्साको आधारमा अड्ने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ । यो बुदा मा राप्रपा को पुरा समर्थन रहनेछ र मलाई लाग्छ सबै नेपाली को समर्थन रहनेछ ।
वजेट कस्तो हुनु पर्छ ?
दक्षिण एसियामा कर तथा राष्ट्रिय उत्पादन को मापदण्ड अनुसार सवैभन्दा धेरै कर तिर्ने नेपाली जनता हुन।यसरि जनताले तिरेको कर( राजस्व को दुरुपयोग नेपाली अर्थतन्त्रको विषेसता भयको छ।यसमा परिवर्तन आवस्यक भयको छ।यसको लागि खर्च सम्वन्धि अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझावहरु लागु गर्नु पर्छ।
वजेटको प्रथामिकताको क्षेत्र कुन कुन हुन आवश्यक छ ?
वजेटले खाध्य सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा, रोजगारी वृद्धि र संकटमा परेको निजि क्षेत्र लाइ विषेश ध्यान दिनु पर्दछ।
वजेटको आकार वारे यहाँको धारणा के छ ?
वजेटको आकार कति गर्ने भन्ने कुरा न्युनतम वित्तीय घाटा र विदेशी मुद्रा क‍ो संचितिमा नकारात्मक प्रवाभ नपर्ने मापदण्ड वमोजिम निर्धारण गर्नु पर्दछ।
बजेट निर्माणकाक्रममा यहाँहरु जस्तै पुर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग सरकार वा अर्थमनत्रीले सरसल्लाह गर्ने गर्नुभएके छ कि छैन ?
पुर्व अर्थमन्त्री को ह‌ैसियत ले म संग यो सरकार र अर्थमन्त्री ले कुनै सुझाव मागेको छैन। स्वघोषित अग्रगामि र क्रान्तिकारी सरकार ले सायद सल्लाह आवस्यक ठानेन होला।
यहाँ त अर्थमन्त्रालयको पनि वागडोर सम्हालिसकेको मान्छे, राजनीति र वजेट को सम्वन्ध कस्तो हुन्छ ?
आर्थिक निति निर्माण योजनाको छनोट र कार्यन्वयनको कुसलता राजनीतिक अठोट
र नेतृत्वमा वस्ने नेताहरुको जनताप्रति उत्तरदायित्व र अनुसासन ले निर्धारण गर्दछ।
यस्ता गुणहरु म अहिले को सरकारमा देख्दिन।
विगतमा पनि वजेट भाषण राम्रै भयका हुन तर कार्यान्वयन भयनन। वजेट विनियोजन हचुवा तरिकाले गर्ने र साधनश्रोतमा भ्रष्टाचार गर्ने चरित्र वर्तमान सत्ता पक्षको मुल विषेषता हो। यसमा आमुल परिवर्तन गर्न सरकार तयार नहुने हो भने कोविड १९ ले श्रृजना गरेको गिरदो आर्थिक संकट ले आगामि दिनहरुमा ठुलो समस्या श्रृजना गर्नेछ।
स्थिरता र विकासमा नेपाल पछि पर्नाको कारण के हो ?
नेपालको किन विकास हुन नसकेको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा अस्थिर सरकारलाई सधैं एउटा कारकका रूपमा देखाइएको थियो । जब सरकार अस्थिर हुन्छ, सत्तामा हुनेहरूमा जेजति समय शासन उपलब्ध छ, त्यो बेला जति सकिन्छ कमाऔं भन्ने मनस्थिति हावी हुने भएकाले जनताको हितको उपेक्षा हुने तर्क राखेर त्यस्तो जवाफ आउने गरेको थियो । पछिल्लो आम चुनावमा जनताले यो अवस्थाको अन्त्य गरे । नेकपाको पाँचवर्षे स्थिर सरकार आयो । सरकारले अब पाँच वर्षका लागि ढुक्कसँग काम गर्न पाउने भयो । कमजोर र भलादमी प्रतिपक्ष र जनताको नयाँ उत्साहले सरकारलाई वातावरण झन् सहज बनाइदिएको थियो । तर, यतिन्जेल सरकारको राजनीतिक र शासकीय गतिविधि हेर्दा राजनीतिक स्थिरता समृद्धिका लागि सायद आवश्यक सर्त भए पनि पर्याप्त हुँदो रहेनछ भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
कोभिड १९ पछि नेपालको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ?
सरकारले सुखी र समृद्ध नेपालको नारा रगड्दै आएपनि त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन । किन होला ?
ओलीको ‘सुखी र समृद्ध’ नेपालको नाराबारे हामीले दुइटा प्रश्न गर्नु जरुरी हुन्छ । यो ‘सुखी र समृद्ध’ नेपालमा को सुखी हुने र को समृद्ध हुने रु यो सुखी र समृद्धि कसका लागि रु निश्चय पनि उत्तर आउला— सबै नेपालीका लागि । तर प्रश्न छ— के सबै नेपाली सुखी र समृद्धिको मार्गमा छन् रु या, धेरैका नाममा थोरैले शोषण र अत्याचार गरिरहेछन् र देशलाई अराजकतातिर धकेलिरहेछन् रु कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीमा देखिएको राजनीतिक पाखण्ड र आर्थिक अन्योलको परिप्रेक्ष्यमा यी प्रश्नबारे चिन्तन जरुरी छ ।
मुलुकमा विक्रिती र विसंगति बढेको हो ?
जुनसुकै राज्यव्यवस्थामा पनि राज्यले जनताबाट उठाउने साधनस्रोतको सदुपयोगरदुरुपयोगको प्रश्न अहं हुन्छ । यस क्रममा राज्यको स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि आ–आफ्नै तरिकाले संरचनागत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मूलतः साधनस्रोत जम्मा र प्रयोग गर्ने जिम्मा पाएका कर्मचारीको क्रियाकलापमा विधिसम्मत नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था राज्यव्यवस्थाको अभिन्न अंग हुन्छ । यो व्यवस्था जब राजनीतिक स्वार्थका लागि खेलबाड गर्ने ठाउँ बन्छ, त्यस बखत सुखी नेपालको कल्पना माफिया नेपालमा रूपान्तरित हुन धेरै समय लाग्दैन । बितेका दुई वर्षमा भएका घटनाक्रमले यो यथार्थलाई पुष्टि गर्दै आएका छन् । यस अवधिमा जनताले तिरेको करबाट राजनीतिका नाममा चालु हुने कार्यक्रममा सुनियोजित तरिकाले गरिने भ्रष्टाचाररलुटले ठूलो फड्को मारेको छ ।
औषधि खरिद काण्डमा मन्त्रीको संलग्नतामा करोडौंको लुट भयो । सरकार यसबारे पनि मौन छ । जनताले अब के बुझेका छन् भने, अनुसन्धान गर्ने अन्य संवैधानिक एकाइ निरीह र निष्क्रिय छन् । कार्यकारीको भ्रष्टाचारलाई कार्यकारीभित्र नियन्त्रण नहुने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक स्वतन्त्र एकाइहरू निष्क्रिय हुने स्थिति उत्पन्न हुनु भनेको राज्य बिस्तारै माफियातन्त्रको हातमा पुग्नु हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा गंभिर धक्का लाग्न सक्छ